बलिउडका पाँच कलाकारको क्यान्सरसँगको लडाइ, यस्तो छ पिडादायी कहनी – Medianp
बलिउडका पाँच कलाकारको क्यान्सरसँगको लडाइ, यस्तो छ पिडादायी कहनी
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २२, २०७५११:३१0
एजेन्सी,२२ असार । लामो समयको क्यान्सरसँगको लडाइपछि सामान्य अवस्थामा फर्केका बलिउड कलाकारको कहानी पिडादायी रहेको छ । छोटो समयमा बलिउडमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भएका कलाकारहरु नचाहँदा नचाहँदै आफ्नो करियरलाई ब्रेक लगाएका छन् भने कोही सामान्य अवस्थामा फर्केर पुनः आफ्नो पेशलाई निरन्तरता दिएका छन् । के गर्दै छन त क्यान्सरसँग जितेका कलाकारहरु :
सोनाली बेन्द्रे : छोटो समयमा बलिउडमा निकै राम्रा फिल्महरु दिएकी उअभिनेत्री सोनाली बेन्दे हाइग्रेड क्यानसरसँग जुधिरहेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले दिएको जानकारी अनुसार उनी खतरनाक अवस्थामा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपी, अहिलेको स्थितीमा क्यान्सरको उपचार सम्भव छ । आशा छ उनी क्यान्सरलाई जितेर फेरि पनि बलिउडमा फर्कने छिन् ।
मनिषा कोइराला : नेपाली मूलकी भारतीय अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई सन् २०१२ मा पाठेघरको क्यान्सर भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनी उपचारका लागि ६ महिनाका लागि अमेरिका गइन् । लामो उपचारपछि सन् २०१५ मा उनी पूर्ण रुपमा क्यान्सरमुक्त भइन् ।
उनी थप्छिन्, ‘जब क्यान्सर हुन्छ तब लामो उपचार चल्छ, त्यतिबेला तपाईंलाई अब के हुन्छ केही थाहा हुँदैन । क्यान्सर पूर्ण रुपमा ठिक हुन्छ वा यसले बारम्बार दुःख दिन्छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन । क्यान्सर रोगीको स्थिती सधैं अन्योल नै हुन्छ ।’ ‘क्यान्सरको उपचारको क्रममा यस्तो समय पनि आयो जब मैले हार मान्न थालिसकेको थिएँ किनभने मलाई यतिधेरै पीडा हुन्थ्यो कि पेनकिलरले पनि काम गर्न छोडेको थियो त्यतिबेला आफूले आमासँग ‘यस्तो पीडा सहनुभन्दा मर्नु जाती’ भनेको थियो ।
त्यस दिन मेरी आमालाई निकै गाली गर्नुभयो । जब म क्यान्सरमुक्त भएँ तब जीवनप्रति मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन भयो । म स–साना कुरामा खुसी खोज्न थालें । सूर्यास्त, सूर्योदय, हावा, पानी विशेषगरी प्रकृति मलाई मनपर्न थाले किनभने मलाई लाग्थ्यो कि यी सब हेर्नका लागि म भोलि जिउँदो रहन्छु वा रहन्नँ ।’
लिसा रे : इन्डो क्यानडियन नायिका लिसालाई सन् २००९ मा मल्टिपल मायलोमा ह्वाइट ब्लड सेल्स को क्यान्सर भएको थाहा भयो तर उनले हार मानिनन् र क्यान्सरविरुद्धको युद्ध जितिन् । एक अन्तर्वार्तामा लिसाले भनेकी थिइन्, ‘क्यान्सरले मेरो जीवन निकै परिवर्तन गरेको थियो । मैले धेरै मानिसहरुको प्रेम र समर्थन पाएँ ।’
युवराज सिंह : सन् २०११ मा भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहलाई क्यान्सर भएको खबरले सबैलाई चकित बनाएको थियो । सन् २०११ मा युवराजले विश्वकप खेलिरहेका बेला उनलाई बान्ता हुने, सास फेर्न समस्या हुने र रिंगटा लाग्ने समस्या देखिएको थियो । खेलपछि जब उनले स्वास्थ्य परिक्षण गरे तब उनलाई फोक्सोको क्यान्सरको पहिलो स्टेज भएको पत्ता लाग्यो ।
क्यान्सरको उपचारका लागि युवराज अमेरिका गएका थिए त्यहाँ उनको लामो केमोथेरापी चल्यो र क्यान्सरमुक्त भएपछि सन् २०१२ मा भारत आएर सन् २०१२ टी२० विश्वकपमा भाग पनि लिए । युवराजले पनि क्यान्सरसँग हार मानेनन् । पछि उनले क्यान्सरमाथि एक किताब ‘द टेस्ट अफ माइ लाइफ’ पनि लेखे ।
अनुराग बसु : सन् २००४ मा भारतीय फिल्मका निर्देशक अनुराग बसुलाई रगतको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो । अनुराग जब फिल्म ‘तुमसा नही देखा’ मा व्यस्त थिए र डाक्टरले उनलाई उनीसँग दुई महिना मात्र बाँकी भएको बताए ।
अनुरागका अनुसार उनी डाक्टरको कुराले निकै डराएका थिए तर उनले क्यान्सरसामू घुँडा टेकेनन् र मृत्युको मुखबाट बचे । पछि अनुरागले क्यान्सरबारे एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘मेरा परिवार र साथीहरुलाई मलाई क्यान्सरको भएको थाहा थियो । जब म बिरामी थिएँ तब परिवारका सदस्य निकै उदास भएर म भएठाउँ आउँथे तर कसैले पनि मलाई क्यान्सर भएको बताउन हिम्मत देखाउँदैनथे ।
उनले थपे, ‘एक दिन महेश भट्ट मेरो घर आए र मेरो टाउकोमा हात राखेर रोएर भने, ‘अनुराग तिमीलाई क्यान्सर छ ’ तर मैले हार मानिनँ र उनलाई भनें, ‘यो त रुघा, खोकी, ज्वरोजस्तो हो, त्यो मलाई थाहा छ । म यो सँग लड्छु, तपाईं चिन्ता नलिनुहोस्’ ।
त्यसपछि डाक्टरले मसँग तीन–चार महिनामात्र बाँकी भएको समेत बताए । मृत्युसँगको पैंठेजोरी कसैलाई पनि मनपर्दैन । मलाई यस्तो रोग लागेको थियो जुन हरेक सेकेन्ड बढ्ने गर्दथ्यो तर मेरो इच्छाशक्ति थियो ।
म ठिक भएँ र आज तपाईंको अगाडि छु । मेरो परिवारले यो रोगपछि मलाई निकै माया गर्छन् । यो रोगपछि मेरी श्रीमतीले मसँग झगडा गर्न बन्द गरेकी छिन् । ’ अनुराग क्यान्सरमुक्त भएपछि सन् २०१२ मा ‘बर्फी’ जस्तो फिल्म बनाए जसको निकै तारिफ गरिन्छ ।
पैसा सकिएपछि पूर्वमिस नेपाल निकिता चाण्डक अभिनित ‘रानीमहल’ अलपत्र
६ महिनामै प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बचाउमा, यी हुन् सरकारलाई बद्नाम बनाउने मन्त्री ?
कमेडियन राजपाल यादव, जो जागिर छोडेर अभिनयमा लागेका थिए ! जान्नुस उनको वास्तविक जीवनकथा